सरकारी सांसदकै बिरोध बढ्दै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / सरकारी सांसदकै बिरोध बढ्दै
सरकारी सांसदकै बिरोध बढ्दै
Posted by: युगबोध in विचार June 13, 2018	0 110 Views
जति नाम र दाम कमाए पनि, जहा उडे वा गुडे पनि, जति ठूलो पदमा पुगे र कद बढाए पनि, जे खाए वा लाए पनि, अन्तिममा उही ‘सिस्ने धाराको पानी र जन्मघरको पि“ढी’ खो ज्नुपनेर् दिन आउने रहे छ । डा. उपे न्द्र दे वको टाले अन्तिम उकालो उक्लने सिढी बनाए जन्मघरको पिढीलाई । सलाम छ दे वको टालाई । तर उनीसगै पढे का, अझ अब्बल ठहरिएका, विद्वान कहलिएका, ने ता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले चाहि“ ‘हिन्दू धर्म विकासको बाधक’ ले खे र अझै पनि मालिकभक्ति प्रदर्शित गदै र् छन् । विकासको बाधक हिन्दू धर्म, सभ्यता र संस् कृति हो कि बुद्धि बे चे र बै रीका बगालमा पुगे का विद्वानहरुका बिग्रे का दिमागमा भरिएको दासताको विकृति ? खो जी गनै र् पनेर् भएको छ । हो ला एकदिन अवश्य पनि । प्रतीक्षाको विकल्प छै न । तर पनि यति त अवश्य भन्न सकिन्छ– भाडाका पाडाले गाडा ताने र समृद्धिको शिखरमा पुग्न सकिन्न । अक्कलबिना अर्काको नक्कल गरे र पनि हुदै न । आन्तरिक स्रो त, साधन र प्रविधिलाई परिस् कृत गदै र् अगाडि बढे दे खि जस् तै लक्षमा पनि पुग्न सकिन्छ । यो दुनिया“मा जो जस ले जति विकास गरे का छन्, हुन्, ती सबै ले कतै बाट आयात र निर्यात गरे का है नन् र छै नन् । आफ्नो गुमाएर अर्काको लिन खो ज्दा ‘यताको न उताको ’ भएका धे रै छन् । तिनै मध्ये का हुन् हाम्रा तथाकथित विद्वानहरु, जो आफै गर्नुभन्दा अकै र् को भरिया बन्न रुचाउ“छन् । मिसनका पाटपूर्जा बने र आफ्नै परिचयप्रति धावा बो ल्छन्, ऊर्जा सिध्याउ“छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति नभएर विकासको बाटो छे कियो भन्ने र हिन्दू हुनाले रो कियो भन्ने उस्तै हुन् दुबै , हात्ती र हात्तीछाप चप्पलजस् तै  ।
प्रायो जित विद्या पढे र र अर्काको बै शाखी वा बुई चढे र, छलकपटको राजनीति र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरे र, आशीर्वाद पाएर सत्तामा पुगे काहरुमा बो लीको भर हु“दै न । हिजो थिएन, आज छै न र भो लिको जिम्मा लिन सकिन्न । सम्झाउ“दै छन् धे रै ले  । ‘ओ लीले टीभीमा २०७४ मसान्तपछि तुइन भन्ने चिज दे खे फो टो खिचे र ल्याउनुस् भने को समाचार हे रे का थियौ ं, अहिले सम्म तुइन हटे न । अब यो फो टो कहा“ पठाउने हो ? सुधीर शर्माको जवाफ कसले दिने ? तुइनलाई तिरै तिर छाडे र, भीर छे डे र रे ल र को शी र कर्णालीमा पानीजहाजबाट ल्याउने समृद्धिका सपनाको रटान सुने र अरुका कान त पाके कै थिए, सत्तापक्षकै ने ता र सांसदलाई पनि असै ह्य हुन थाले छ अचे ल । घनश्याम भुसाल मात्र अपवाद हो लान् कि भने को त अरु पनि निस् कन थाले खुरुखुरु । त्यसै ले दीनानाथ शर्माले ले खे – समृद्धिको चकोर् भाषण मात्रै हो इन, कलंकीदे खि नागढुंगासम्मको नौ किलो मिटर बाटो सम्पन्न गरे र त दे खाऊ ।’ ब्यंग्य हो इन यो  । सहन नसके को अभिव्यक्ति चाहि“ हो है  ।
अब अर्का ने ता भीम रावलका कुरा सुनौ ं, पढौ ं – म सत्तापक्षकै सांसद हु“ । भारत भ्रमण गनेर् बे लामा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने को थिए“, ती सहमति (माथिल्लो कर्णाली) ने पालको हितविपरीत छन् भने र हामीले भन्न सके का छै नौ ं ।
चीन संस् थापन पक्षस“ग सम्बन्ध कायम गरे र स् थायित्व खो ज्ने खालको कूटनीति चलाउ“छ भन्ने कुरा एकदमै यथार्थ हो  । हाम्रो तरीका कस् तो छ भने एउटा सरकारले १० बु“दे ग¥यो , अकोर् सरकारमा अत्तो पत्तो छै न । कसले पत्याउछ ?
सिमानामा भारतको रे ल आउ“छ भने त्यो ने पालको हितमा छै न । भारतका स् िटमर ल्याएर को शीमा चलाउने हो भने काम छै न । बन्द गरिदिए हुन्छ ।’ भीम रावलले भने का कुरा अरुले भन्दा विकास बिरो धी, समृद्धि बिरो धीको बात लाग्ने थ्यो  । युथफो र्स र वाइसिएलले भकुर्न बे र थिएन । रावललाई कुनै खतबात लाग्ला कि नलाग्ला ? सिण्डिके ट तो ड्ने चट्टानी अडान लिएको भो लिपल्टै यातायात विभागका महानिदेर् शकलाई ताने र दे खाउने सरकारले काम नगनेर् ठे के दारलाई कारवाही गर्न सूची प्रकाशित गरे को छ । सार्वजनिक गरिएको सूची पनि सिण्डिके टलाईजस् तै तर्साउनका लागि मात्र नहो स् भन्ने धे रै भए । च्याप्पच्याप्प समाते र कारवाही गनेर् , प्रमाणपत्र खारे ज गनेर् , क्षतिपूर्ति भराउने कि नाम सार्वजनिक गरे र हल्ला चलाउने ? ‘हल्ला बढी गनेर् ले काम गदै र् नन् र काम गनेर् ले हल्ला चलाउन पनि खो ज्दै नन्’ भन्ने चलन पनि छ हाम्रो समाजमा । ‘भुक्ने कुकुरले टो क्दै न’ भने को त्यही हो र ‘गरजते बादल बरसते नहीं’ भने को पनि उही हो  । चर्चामा छाउन मन्त्रीहरुले गरे का प्रयासको सकारात्मक नतिजामा आउन कति दिन लाग्छ ?
हिजो सम्मका संयुक्त सरकारमा बसे र छलकपट र ढा“टको काम गरे को बानीले बिगारे र अहिले को बलियो सरकारले पनि गति लिन सके न । भटाभट जनपक्षीय निर्णय गरे र काम अगाडि बढाउ“दै गएन । आ“टै गरे न । हावाले उडाउने खालका हल्ला र गफै मात्र बढी भयो , ग¥यो भन्ने परे को छ समाजमा । शिक्षा, स् वास् थ्य, सुरक्षा, निर्माण, गै रसरकारी संस् था, दातृ निकायका दलाल, कथित अधिकारकर्मी, वकिल, सञ्चार, यातायात, वै दे शिक रो जगार क्षे त्रका माफियाले सरकारलाई सही निर्णय गरे र अगाडि बढ्ने बाटो मा अवरो ध पै दा गरे का छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका वरिपरि माफियाकै झुण्ड छ । कान फुक्ने , गले ढले मा तातो पानीले से क्ने र बाटो छे क्ने हरुको बगालका बीचबाट पहिले मन्त्रीहरु आफै उम्कन सक्नुपर्छ भन्छन् पूर्वप्रशासक र मन्त्रीहरुले  । तस्कर र माफियाका लस्कर साथमा लिएर कति दिन चल्छ ? सरकार त ढल्दै न तर हुनुपनेर् , गर्न सकिने र दे खिने काम पनि हुदै न । त्यस् तो भएपछि झिंगा मार्न तो प पड्काउनु परे को र बहादुरी गरे को हल्ला पिटाउनुपर्छ । त्यही त भइरहे को छ अहिले  । चर्पी उद्घाटन गराएर चर्चामा ल्याउने हरुको भीड बढ्यो  । प्रशंसाले पुरे रै सिध्याउने भए । विष्णुपुराण र शिवपुराणभन्दा कति फरक हो ला ओ ली र प्रचण्ड पुराण ?
अब अकोर् पाटो तिर फकौ र् ं । ने पाली कांग्रे स सरकारबाट बाहिरिएपछि पानीबिनाको माछो जस् तै भएर छट्पटाएको छ, फट्फटाएको छ आफै भित्र । लो कतन्त्रको दह्रो खम्बा भएको भने र गर्व गर्न छाडे को छै न र अहिंसाको राजनीतिको पर्याय भन्न पनि बिसेर् को छै न । कम्युनिष्टले झै हामीले बन्द, हड्ताल, आगजनी, हत्या, हिंसा र तो डफो ड गदै र् नौ ं । सभ्य तरीकाले बिरो ध गछौ र् ं भने पनि आवे ग र उत्ते जनाले आगो झो स् ने काम गरिछाड्यो  । ने विसंघलाई सडकमा उतारे र, सरकारी गाडी जलाएर । राजश्व तालिम के न्द्रको बा १ झ ८८१८ नम्बरको गाडीलाई काठमाडांै को शंखमूलमा जलाएर के पायो कांग्रे सले ? आन्दो लन गरे को मा विरो ध है न, गर्न मिल्दै न । यसै पनि महंगी अनियन्त्रितरुपमा बढे कै छ । महंगी विरुद्धको आन्दो लनमा उपभो क्ताले पनि साथ दिनै पनेर् हो , दिएनन् । हिजो का नामुद ढा“टले आजै यस् तो गनेर् आ“ट कसरी ग¥यो भने र । सत्ता र भत्तामा रहे का बे ला कांग्रे सले गरे का पाप पखाल्न धे रै वर्षसम्म दे वघाटमा गएर डुब्नुपर्छ । तत्कालीन एमाले र माओ वादी के न्द्र चो खा भएर रो जे का है नन् जनताले  । तावाको तापले उफ्रदा आगाको भुंग्रो मा परे को चाल पाउने बे ला बा“की छ । यदि त्यसो है न र राम्रो गरे छन् भने बे हो रौ ंला, दे खौ ंला, सघाऔ ंला । नत्र उही ड्याङ्का हुन् सबै  । नाम मात्र फरक हो काम त उस् तै छ । दे श लुट्ने र कार्यकर्ता पो स् ने  ।
ढुकुटीको धनले बुझाउनुपनेर् मन र पदले पुर्नुपनेर् कद, कहिल्यै भरिदै न । जति कमाए पनि नहुने , दिए पनि नपुग्ने , असन्तो षी र अहंकारीका बीचमा भ्रष्टाचारी र सदाचारीको पहिचान गर्न पनि गाह्रो छ । हिजो का शक्तिके न्द्रका हरवा चरवाहरु अहिले का पनि हरवा चरवा हुन्, छन् । मालिक मात्रै फे रिएको हो  । वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घे रा, अलिशान भवन, भक्तहरुको भजन र कीर्तन, चौ रासी व्यञ्जनको भो जन, वातानुकूलित बसाइ, सुसारे हरुको से वा र जगह“साइ, भा“तीभा“तीका घो डा गाडीका ता“तीमाथि जति सुविधा थपे पनि अन्त्यमा ‘सिस् ने धाराको पानी र जन्मघरको पि“ढी’ खो जिदो रहे छ । साथमा लै जान पाइ“दो रहे नछ सुनका थै ला । लगे नन् कसै ले  । तीनै लो क जिते को ठाने का अहिले का र पहिले का शासकले पनि लग्दै नन् । अति नगरे हुन्छ त्यसै ले  । अलि पत्याउने खालका कुरा र काम मात्र गरे पुग्छ । नुनका ठाउ“मा सुन हाले र हु“दै न, मीठो बन्दै न दाल तरकारी र अचार । अति भो प्रचार ।
Previous: सौडियारमा वस्तीस्तरीय योजना छनोट
Next: ऐतिहासिक सेन्टोसा शिखर वार्ता विश्व शान्तिको यात्रा